Uma exhumene ezinye imikhiqizo ukuthi kudingeka ukuba uxhume. Ukuze lokhu kwenzeke kahle nangokunembile, wena ulwazi ewusizo yezindlela eziyisisekelo stapling eseqedile izingxenye. Ngaphambi kokuqala kwakwakhe crosslinkable wathungela Indwangu izingxenye ohlangothini reverse ukuwapheka ngesitimu kunokuwabilisa noma ironed ngokusebenzisa ngendwangu emanzi. Ngaphezu kwalokho kufanele omisiwe futhi ukwandisa faceup, baqala crosslink nge ithiphu blunt we ngenaliti yokuthunga, ukusebenza kusuka kwesokudla kuya kwesokunxele. Ukuze Stitch obumbene kwaba cishe ezingabonakali, kungcono ukuthatha intambo esuka ukuthi ntambo, eyayisetshenziselwa ukunitha.
Ovundlile umphetho wathungela esetshenziswa ukuze ujoyine ehlombe umthungo, ezinkulu of kwenzakalani. Yena ivaliwe futhi iluphu evulekile.
Stitch obumbene nge izihibe avaliwe. Inaliti busuka iluphu okuyinto eshidini phezulu ngaphezu izihibe avaliwe. Khona-ke, ngendlela efanayo kubalulekile ukuze singene iluphu of ikhaba okuphambene. Okuyisisekelo ngamasentimitha ambalwa, intambo kufanele some.
Stitch obumbene nge izihibe evulekile. Lapha, irowu lokugcina izihibe emikhiqizweni ngokuningiliziwe wathungela kungukuthi ivaliwe. Lwazo zizonke, ngiphakamisa nge spokes, noma emgqeni wokugcina ngaphambilini obumbene Ngokuphambene ngentambo asizayo,
okuyinto Ukuqedwa ngokuphindaphindiwe. Inalidi is busuka iluphu lokuqala izingxenye wathungela, futhi uyalilandela whereupon loop ngentambo edonswa futhi ahlubule. On izingxenye okuphambene wacosha nge inaliti nentambo edonswa esikhaleni esivulekile kuqala, bese wasithatha esilandelayo, inaliti engena phansi
up. Lezi izimo aphindaphindwe kuze oyifunayo umphetho ekupheleni izindawo, ukukhipha spokes ithungwe iluphu.
Kuqondile Stitch obumbene isetshenziswa ukuxhuma imidwebo ezinhlangothini emgqeni, emapheshana imigqa. Iphinde isetshenziselwe ngokuba Raglan.
Ukuze enze mpo obumbene Stitch emidwebweni ezihilela ngaphambili Stitch, udinga ithungwe ngokuningiliziwe wathungela seceleni nezinye parallel, uyibhekise phansi. Needle bamba axoxe promezhdu onqenqemeni loop bese loop umzila Ingxenye yokuqala, bese - kwesokunxele. Ngakho, ukuphinda lesi senzo yanjalo, ngaphandle ukweqa ngentambo umsindo.
Ukuthi umphetho uhlala nokunwebeka, musa qinisa intambo Friend too. Kuqondile obumbene Stitch emidwebweni ezihlobene purl Stitch, usebenza isimiso esifanayo.
Amabili Indwangu wathungela ingajoyinwa ngezinye izindlela. Kuhilela ukubhekana mpo obumbene Stitch izinaliti. Okokuqala kuyavumelana ingxenye yokuqala kuwebhu. ke ingxenye yesibili ohlanganiswe ukunitha lokuqala ngesikhathi zonke emgqeni wesibili: bead iluphu lesibili web onqenqemeni provyazyvaetsya nge iluphu
kuqala. Lokhu iluphu kungaba kokubili nangemuva - bethanda.
Xhuma izingxenye umkhiqizo angasebenzisa hook ukukhilosha. Le nqubo isetshenziselwa inhlangano yabantwana engalingani isakhiwo sewebhu, efana openwork
matings. Futhi, le ndlela isetshenziswa ngokucubungula armholes, entanyeni phansi, uma ngasonqenqemeni udinga ukudayela loop. Ukujoyina webs phakathi kwabo, hook yethulwa ngokusebenzisa kokubili izingqimba i-loop onqenqemeni, ukuqonda kanye ukudonsa intambo ngokusebenzisa wazi hook.
Ungakhetha indlela yakho ayethanda zokujoyina izingxenye. Lokhu umphetho wathungela ukuqinisekisa ukunemba ukuqina umkhiqizo.
Indlela ukwenza amakha ekhaya - ezintathu iresiphi elula
Yini welithi "engamukelekile"? Le mfanelo uhlamvu noma ugula ngengqondo?